पुष्पराज अधिकारी: तपाईं पनि म जस्तै ठगीमा पर्नु होला ।
हामी सवैलाई आवश्यक पर्ने साधनहरु मध्य पैसा पनि एक हो । जिन्दगीको यात्रा पुरा गर्न नेपाल जस्तो देशका नेपालीहरुको लािग पैसा नभइ नहुने साधनको रुपमा रहेको छ । सवैलाई पैसा कमाउने रहर छ । आफ्ना असिमीत ईच्छा चाहना पुरा गर्ने सपना केवल अडिएको छ त पैसाको कारणले मात्र अडिएको छ। आज छलफल गरौ हामीले पैसा कमाउने स्रोत के के हुन सक्छन् । म पनि निकै सोच्दै थिए । पत्रिकको विज्ञापन अझ वर्गिकृत विज्ञापन त सवै सवै पढने वानी वसीसकेको थियो । त्यहाँ आकर्षक तलव कम लगानी, विनालगानी, घरमै वसेर वीसौहजारको लालसा देखाइयो त्यसको शीर्षक थियो नयाँ जागिर खाने काइदा । म पनि त्यसमा दिइएको फोन नम्वरमा फोन गर्न थाले । आहा निकै मिठो सपना देखे । काठमाण्डौं गए । उनलाई भेटन खोजे । भेटे । विस्तारै वुझ्दै जाँदा त्यो त ठगी गर्ने माध्यममात्र रहेछ । उनको अफीसमा गए । फारम भरे । कामको लागि एक हप्ता पछि सिधै आउनु भन्ने अनुरोध गरे ती हाकीम साहेवले । हाकीमत भन्नु प¥यो नी जागिर लगाउने मलिकलाई । कमको वारेमा सोधे एउटा अफिसमा टाइपीङको काम गर्ने रहेछ । ए सजिलो काम रहेछ भन्दै फर्किए । त्यहाँ म जस्तै निकै जना आएका थिए ।
समय वितेको पत्तै भएन । एक हप्ता पछि म पहिलेकै ठाउँमा गए । ल खत्तम त्यहाँत म.म. पसल पो खुली सकेछ । म त्यसै निरास भए । फर्के । फेरी अर्को वर्गिकृत विज्ञापन हेर्न थाले । त्याहँ पनि सम्पर्क अनुसार वोलाइएको ठाउँमा पुगे । एउटा घरको तेस्रो तल्लामा अफीस रहेछ । वोर्ड हेरे । सरासर भित्र पसे । मेरी आम्मै ! छि छि । त्याहाँ त पुरानै केटा पो रहेछ । त्योपनि आपत्ती जनक अवस्थामा । नाङ्गै नजिकै अर्की एउटी युवती रुदै रहिछीन् । सवै लुगा च्यात चुत भएको अवस्थामा । म अक्क न वक्क परे । उसले मलाई साहैं नराम्रा शब्दले हकार्यो । सोमत नभएको भन्यो । भित्र पस्नु अघि ढोका ढक ढक गर्नु पर्र्ने अरे मैले । मलाई निकै रिस उठ्यो । तैंले यसो गर्नुहुने मैले चाही तेरो अनुमति लिएर भित्र पस्नु पर्ने । म संग झगडा पर्ने थाले पछि ती युवती त्याहाँवाट भागिन् । सायद उनलाई लुटिसकेको इज्जत फेरी जोगाउने बाध्यता भयो होला । हाम्रो समाजले छोरी लुटिए अपमान गर्छ तर छोरा लुटिए सहानुभुती दिन्छ ।
सायद ती युवती पनि म जस्तै जागिरको खाजीमा त्यहाँ पुगिन् होलीन् र त्यो ठग यौन पिपासुको फन्दामा परिन् । पितृ सत्तात्मक समाजमा पुरुषको हैकम सर्वव्यापी हुनुले पनि यस्ता अपराध जन्य घटनाहरु घटिरहेका छन् । मलाई अव त्यो मैले हेरेको पहिलो पटकको विज्ञापनको शीर्षकले मात्र वारम्वार घोचीरहन्छ । नयाँ जागिर खाने काइदा । नभन्दै त्यो ठगको लािग त नयाँ र अचम्मकै काइदा भइगयो । मैले पो वुझिनछु त , उसले त आफ्नैजागिरको लािग पो विज्ञापन गरेको रहेछ । विचार पु¥याउनुहोला कतै तपाईं पनि म जस्तै ठगीमा पर्नु होला ।